Mamorona tranokala miditra ho an'ny 2014 | Martech Zone
Isan-kerinandro amin'ny Edge an'ny Radio Web podcast, izaho sy i Erin dia manasongadina fa ny lesoka ananan'ny ankamaroan'ny orinasa dia ny mino fa ny tranokalan'izy ireo dia bokikely an-tserasera fa tsy mpivarotra miaina sy miaina. Rehefa mamokatra atiny mahafinaritra izay vao haingana sy matetika ary mifandraika ny tranokalanao… manangana hery ianao ary ampio ny olona hino anao sy ny vokatrao na serivisinao.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa tsy mino aho mampihiditra dia soloina Mivoaka paikady varotra sy varotra. Orinasa maro no mifandrafy ny roa tonta fa rehefa miara-miasa izy ireo dia zavatra mahafinaritra!
Ity misy infographic avy amin'ny Suyati amin'ny marketing miditra, amin'izay tokony hataonao mba hahazoana antoka fa mihodinkodina amin'ny mpitsidika ny tranonkalanao amin'ity taona ity:
Personas mpividy manapa-kevitra ny amin'ny fomba hifandraisanao amin'ny karazana mpitsidika tsirairay.
Votoatin'ny snackable vs atiny premium ho an'ny fandevonan-kanina mora.
Paikady fampiroboroboana miaraka amin'ny SEO, PPC, Blogs, Media sosialy, fanasana Webinar.
Antso-To-Action (CTAs) handroahana ireo mpitsidika hidina ao amin'ny pejy fandraisana.
fiantsonana Pages handroaka fiovam-po.
Fitaiza nitaiza hitarika ny mpitsidika ho lasa mpanjifa.
Aza hadino ny misoratra anarana amin'ny làlan'ny fianjerana mampihiditra ny Marketing ao amin'ny kiheba ankavia, dia fampianarana 5 herinandro izay manitsy anao amin'ny lafin-javatra rehetra amin'ny tetikady marketing mahomby.
Disclosure: Suyati mpiara-miasa aminay ao Highbridge - Nanampy anay tamin'ny lafiny maro izy ireo ary manana fitaovana mahafinaritra ho an'ny famokarana atiny sy ny fitantanana ny dingana antsoina hoe Voraka izay hosoratanay.
Tags: fitorahana bilaogybilaogybuyer personasmiantso amin'ny asaantso ho amin'ny hetsikactamampihiditra barotratranokala miditramitarika fikarakaranaMarketing Webinarmarketing varotrappcfisondrotanaSEOhaino aman-jery sosialy
SXSW 2014 Famonosana Infographic Interactive